Gudniinka Fircooniga ah iyo Galmada
Anthropology: Gudniinka Fircooniga ah iyo Doorkiisa Jinsiga
Raaxada Guurka: Gudniinka (Qeybta 9-aad)
Ereryga gudniin waxa loola jeedaa goyn, waana ta birta geedaha lagu gooyo lagu magacaabo gudin. Haddaba marka laga eego xagga Sharciga Islaamka, gudniinka inanku waxa weeye in laga gooyo qolofta oo iyadu ah maqaarka ku dahaaran dhalfada oo ah madaxa xubinta taranka.
Gudniinka inantu waxa weeye in gabal laga jaro qolofta ku dahaaran kintirka oo isagu ah xubin kamid ah xubnaha taranka kuna dhacda dusha sare ee godka cambarka. Kintirku waxa uu leeyahay shaqo aad muhiim u ah, isaga oo keena dareenka macaansi iyo biyabbax ee haweeneyda xilliga galmada.
Ha yeeshee, shucuubta xitaa kuwa hablohooda sunno gudeeya siday dadka qaar ku magacaabaan , lama gooyo qolfada oo qura balse waxa lala jaraa kintirka oo idil, halka gudniinka Fircooniga ah laga dabarjaro kintirkii iyo dhammaanba faruuryihii cambarka, sida aynu gadaal ka sharxi doonno.
Mowduuca gudniinku waxa uu kamid yahay mowduucyada aan wax badan laga qorin, aadna mooddo inay dadku ka hadalkiisa kaba xishoonayaan. Culimada Islaamka badankoodu ugama aanay hadal gudniinka sida ay uga hadleen waxyaabo badan oo ka ahmiyad yar sida cadaysiga.
Tusaale ahaan, Imaam Xaamid al-Qasaali silsiladdiisii kutubbada ee uu ugu magac daray Soo Noolaynta Culuumta Diinta, shan sadar oo qura ayuu kaga soo hadal qaaday gudniinka. Ma jirto hal aayad oo xitaa laga dhadhansan karo jiritaanka gudniinku.
Sidoo kale waxa la waayey hal xadiis oo saxiix ah oo waajibinaya amaba sunno ka dhigaya gudniinku. Daraasado badan oo ay sameeyeen culimada caafimaadku waxay ku caddeeyeen in cudurrada kaadi mareenka raggu yar iyo weyn ay ku badan yihiin kuwooda aan gudnayn. Waxa kale oo la caddeeyey in cudurrada galmada laysku qaadsiiyo sida jabtida iyo aydhisku ay aad ugu badan yihiin ragga aan gudnayn.
Waxa weliba intaa dheer, lana ogaaday waqti fog in gudniinka raggu uu yareeyo cudurka kansarka ee ku dhaca xubnaha taranka ragga iyo kan ku dhaca luqunta ilma-galeenka dumarkooda. Waxa dalalka Yurub iyo Mareykanka jira dad badan oo isu guda si ay cudurradaasi uga badbaadaan. Gudniinka ragga sida ay culimadu leeyihiin, waxa looga dayday Nabi Ibraahim.
Nabi Ibraahim oo isaga loogu yeero Nabiyada Aabbohood, waxa uu Eebbe ina farayaa inaynu qaadanno diintiisii, oo wixii isaga la faray waa inaynu qaadanno wixii laga reebayna aynu ka fogaanno. Qaar baa ku fasiray meel ka tirsan Shaam, halka qaar kale yiraahdeen waa aaladdii uu Nabi Ibraahiim isku guday, waxana loo badan yahay inay ahayd faas ama gudin. Culimadu waxay sheegaan in Nabi Ibraahim uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee isguda, ciddiyaha iska jara, surwaal gashada, shaaribka gaabiya, kaba kabsada, seef ku dagaallama, iyo weliba qofkii ugu horreeyey ee ay madaxiisa cirro kasoo baxdo.
Haddaba kol haddii Nabi Ibraahiim la faray inuu isgudo, waajib bay ahayd taasi la saaray. Saa darteed waxa annagana haddaynu Muslimiin nahay ina saaran isla waajibkaas aabbeheen Nabi Ibraahin uu Eebbe saaray. Nabigeennii suubbanaa Muxammad waxa la weriyey inuu dhashay isagoo gudan. Carabtii hore ninka buuryo qabka ah ee aan gudnayn way caayi jireen, waxana taas lagu xaqiijiyey gabayadii la tiriyey xilligaas.
Buuryo qabku waxa uu ahaa qof dhiman oo la liido, waxana uu tusaale iyo bar tilmaameed u noqon jiray gabyaa kasta oo cid jab iyo caay la maaggan. Gudniinku haddaba Islaamka ka hor waxa uu ahaa caado fac-ka-fac layska dhaxlay, waxana intaa dheerayd iyada oo kolka gaban la gudayo loo samayan jiray xaflad iyo waliimo gaar ah oo dadku isugu yimaado.
Haddaba kolkuu Islaamku yimid, gudniinka raggu waxa uu kamid noqday caadooyinkii la ansixiyey, ha yeeshee culimada diintu ilaa iyo iminkadan la joogo, inkastoo dhammaan ku qanacsan yihiin in wixii Nabi Ibraahiim la faray ay annagana ina saaran yihiin, misana kuma aanay heshiin in gudniinku waajib yahay iyo inuu sunno yahay midnaba. Imaam Axmed iyo Maalikiyada qaar waxay yiraahdeen waa waajib, halka Abuu Xaniifa ka yiri waa sunno.
Qofkii guditaanka iska daayase muxuu xukunkiisu yahay? Waxa qolfada laga gooyaa qayb goynteedu ay suurtagal ka dhigi karto in dhalfada oo dhan amaba inteeda badani ay qaawanaato. Gudniinku waxa uu leeyahay laba waqti oo kala ah: Waqti uu waajib yahay kaasi oo ah waqtiga qaan gaarka iyo waqti uu sunno yahay oo ah intaanu qofku qaan gaarin.
Waxa sunno ah bay culimadu leeyihiin in ilmaha la gudo waqti u dhexeeya marka uu dhasho ilaa iyo toddoba jirkiisa, waqtigaasi oo u naxariis badan, dhaawacuna bogsoon ogyahay.
Culimada badankoodu waxay isku raaceen inay wanaagsan tahay in la gudo maalinta toddobaad ee dhalashadiisa, in uu taag daranyahay mooyee, markaasi oo dib loogu dhigayo. Kitaabka Fiqhu Sunna waxa ku soo aroortay inay axaadiista ka hadlaysa gudniinka habluhu dhammaantood daciif yihiin oo aanu mid saxiix ahi ku jirin. Nabigu waxa uu dhalay afar gabdhood inuu gabdhihiisa gudayna sunnadiisa iyo siiradiisa midna laguma sheegin. Iyadoo ay Saarah la socoto ayuu Ibraahiim soo maray boqor kale, markaas buu boqorkii Ibraahim weydiiyey cidday gabadhu tahay.
Ibraahiim markuu boqorkii uga sheekeeyay cidda ay Saarah tahay buu ka baqay inuu damco, markaas bay labadoodu intay boqorkii habaareen buu labada lugood iyo labada gacmoodba ka qallalay. Labadii wiil baa dhashay weyna isla koreen. Haddaynu xitaa ka dhigno inu xadiisku saxiix yahay, toosinta ku jirtaa ma aha amar uu Rasuulku ku bixiyey in hablaha la gudee waxa weeye qaabkii loo gudi lahaa haddiiba la gudayo.
Wararku waxay sheegayaan in Carabtu adeegtooyinka dumarka addoomaha ah oo qura ay gudi jireen. Ha yeeshee dadka kasoo horjeeda gudniinku iyana waxay ku doodayaan in ereygaasi aanu daliil u noqon karin gudniinka dumarka. Waxay leeyihiin afka Carabiga kolka laba wax la magacaabayo waxa labadoodaba lagu magacaabaa magaca kan caansan ama awoodda badan. Sidaa daraadeed bay leeyihiin sunnada Nabiga ee saxiixa ah meelna kama soo galo gudniinka habluhu, waxa lagu doodayo oo xadiisyo ku saabsan habla gudistuna gebigood waa wada daciif aan shir lala tegi karin, arrinkuna ma sii dhaafsana caado uu Islaamku u daayey waqtiga iyo horumarka cilmiga ama iyagu ha toosiyaan ama ha tiraane.
Faraaciintu kolkay Suudaan Dhulkii Nuubiyiinta qabsadeen sidoo kalena boqorradii Nuuba ay Masar qabsadeen bay caadada gudniinka Fircooniga ahi waxay ku fidday Waadiga Niil, ilaa iyo waqtigaan la joogana way ka jirtaa. Ma jirto dunida meel aan Waadiga Niil iyo waddamada ku dhowdhow ahayn oo laga yaqaan caadadaasi. Waxa la hubiyey in gudniinka caynkaasi ah laga isticmaalo oo qura dalalka Masar, Suudaan, Soomaaliya iyo Kiinya. Intaynaan u gelin dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga ah, bal aynu marka hore sharrax gaaban ka bixinno xubnaha taranka dumarka, si ay akhristaha ugu sahlanaato inu ogaado waxa dhacaya.
Xubnaha taranka dumarku qaybaha sare waxay ka kooban yihiin: Faruuryaha waaweyn: Waa laba lakab oo maqaar ah, kana billowda bisaqleyda jiitamana ilaa lafta dabaqanaanta halkaana ku milma. Faruuryuhu waxay ka samaysan yihiin gaballo xayr iyo carjaw isugu jira iyo shabakad dareemeyaal aad u dareen fudud ah.
Waxa kale oo ka dhex buuxa xididdada dhiigga qaada oo soo gaarsiiya dhiig aad u fara badan. Faruuryaha yaryar: Waa laba lakab oo maqaar khafiif ah, kuna dhaca dhanka gudaha ee faruuryaha waaweyn, waxana laftooda soo gaara dhiig aan yarayn.
Dhanka gadaale, faruuryaha yaryari waxay ku kulmaan xuubka bikaarada, dhanka horena waxay daboolaan kintirka. Faruuryaha yaryar waxa dhinaca dambe kaga dhex jira daloolkii hoose ee cambarka dhanka horena kii kaadida.
Kintirka: Waa xubin u dhiganta geedka ninka kolka laga eego xagga kicitaanka iyo dareenka, waxana ku dhexjira xididdo fara badan oo dhiigga qaada.
Kintirku sidaynu soo sheegnayba waxa uu ku yaal halka ay ku kulmaan labada faruuryood ee yaryar dhankooda hore, salkiisuna waxa uu ku dhow yahay daloolka kaadida.
Kintirka ciyaar ciyaar looma abuurin, balse waxa uu leeyahay shaqo dabiici ah oo aad muhiim u ah. Sida geedka ninku u kaco ayuu kintirkuna u kacaa, dabeetana labada faruuryood ee waaweyn dhiig ka soo buuxsamaa, qanjirraduna dheecaan soo daayaan fududeeya howsha galmada, haweeneydana siiya dareenka macaansi ee howshaasi galmo.
Xubnaha taranku waxay leeyihiin shaqo leh qaayo aad u weyn, taasi oo ah sidii isku si looga qaybgeli lahaa shaqada bayoolojiyeed ee muhiimka ah. Gudniinka Fircooniga ahi waxa uu khasab ka dhigayaa in la jaro qayb kamid ah faruuryaha waaweyn iyo in gebi ahaanba la dabar jaro faruuryaha yaryar iyo kintirka. Dabeeto qori dhuuban sida kan cuudka kabriidka inta la dhex suro faruuryihii waaweynaa ee qaybta laga jaray baa markaa dhinacyada laga soo qodbaa, amaba lama qodbee, labada bawdo ee inanta layku dabraa, si dhaawacii faruuryuhu isugu bogsado baanto.
Afartan beri kedib baa dabarka laga furaa si loo hubiyo inuu cambarkii gebi ahaamba isku baantay. Qoriga yar ee dhexda la suray waxa loogu talo galay in kolkay faruuryuhu isku baantaan ay reebaan dalool ay inantu ka kaadiso kolkay qaan gaartana dhiigga caadadu uu kasoo baxo. Sidaas baa haddaba dumarkayaga looga xayuubiyaa xubintii taranka ee Eebbe u sameeyey. Inanta sidaa loo galay waxa nafteeda iyo nolosheeda hareeya nacayb iyo cadawtinimo, mar haddaanay galmada ninkeeda ugala qaybgeli karin sidii dabiiciga ahayd ee laga doonayey.
Waxay weysaa raaxadii ay ka heli lahayd galmada saxda ah, waxana nafteeda ku dhasha welwel iyo walbahaar, dareentaana inay baadi tahay, dhankay dabayshu u socotana ka hor jeeddo, iyadoo weliba isu qaadata inay samaynayso hawl ay ku khasban tahayna. Shoogga qalliinka: Shoog xoog leh baa ku dhasha shaqada xubnaha jirka oo dhan, gaar ahaan kolka inanta la gudayo iyadoon la kabaabyayn. Shooggaasi waxa uu keenaa bareesharka dhiigga oo aad hoos ugu dhaca iyo xawaaraha neefsashada oo yaraada, waxyaabahaas oo isu geyntoodu ay geeri keeni karaan.
Shoogga qalliinku waxa kale oo uu inanta ku abuuraa baqdin joogta ah iyo galmada oo aanay jecleysan. Dhiig bax: Waxa taas keena haweeneyda inanta gudaysa oon haba yaraatee wax aqoon ah u lahayn xididdada dhiigga qaada ee goobaha ay jarayso ka buuxa. Hablo badan baana gowracaasi naxariis darrada ah awgiis dhiig bax ugu dhintay.
Laxaw iyo hambalaaluq: Sababtu waxa weeye aqoon darri ku saabsan aasaasiyaadka cilmiga caafimaadka. Hambalaaluqa waxa keena cudur sideyaalka soo raaca aaladda aan nadiifka ahayn amaba mararka qaar ruujinada ah ee inanta lagu gudayo iyo jawiga guud ee ay ku nooshahay labadaba.
Waxa kale oo laga yaabaa in daloolka dusha sare lagu abuurayaa Ilaah baa wax abuuri karee uu aad ciriiri u noqdo oo laftiisu qayb ahaan ama guud ahaanba dhaawaca la bogsoodo. Arrintu uma baahna sharraxaad intaas ka badan bay ila tahay, maadaama meesha aan ka guuxayo la wada garanayo. Xanuunka nifaaska: Mar kasta ooy haweeneydu ummulayso waxa lagama maarmaan ah in lagu isticmaalo maqas iyo middiyo, si loo dillaaciyo looguna sameeyo dalool uu ilmuhu soo dhaafi karo, mashaqadaasi oo haweeneyda miskiinta ah ugu filan inu ku yimaado xanuunka nifaaska ee dilaaga ahi.
Waxa kale oo ka fekerka qalliinka ku soo fool lihi haweeneyda ku dhaliyaa baqdin iyo welwel gaarsiin kara in ilmihii kaba soo bixi waayo, ooy markaasi qalliin kii hore kasii xag jira u baahato si ay u ummusho. Madhalaysnimo: Tirakoobyadu waxay sheegayaan in dumarka dalka Suudaan ee madhalayska ah boqolkiiba illaa boqolkiiba gudniinka Fircooniga ahi uu sabab u yahay madhalaysnimadooda.
Ugu dambayntii, xanuunka uu gudniinka Fircooniga ahi ku reebayo nafsiyadda gabadha, kana dhasha jeexista iyo tolista joogtada ah mar kasta ooy ummulayso ayaaba dhibaato oo dhan ugu filan haddii dhab loo fekerayo.
Ilaah waxa uu lacnaday haweenka is shaabbadeeya iyo kuwa wax shaabbadeeya labadaba. Shaabbadu waxa weeye in cirbad iyo wax lamid ah jirka qayb kamid ah lagu mudmudo, si goobahaasi midab cagaar ah loogu sameeyo. Caadadaasi ilaa iyo maanta waxay ka jirtaa dalal badan waxana tusaale loo soo qaadan karaa dalka Itoobiya, ooy dumarku ciridka cagaarsadaan.
Waan luminayaa, waan rajo gelinayaa, amarna waan siinayaa, waxayna markaa jeexjeexayaan dhegaha xoolaha, amar baan siinayaa, waxayna beddelayaan abuurka Alle. Waxaba ugu siid daran aayadda ugu dambaysa oo qofka dhegaha xoolaha jeexjeexaya ku tilmaantay qof abuurka Alle beddelaya shaydaanna ka amar qaata. Waxa kaa lamid ah hooyada raalli ka noqota, gowraca gabadheeda iyo islaanta dhiigya cabka ah ee iyadu shaqo ka dhigatay inay dumarkeenna ka disho dareenkii dumarnimo ee Ilaahood ugu deeqay.
Dadka qaar aan xilkas ahayn baa ku dooda in gudniinka Fircooniga ahi dumarka dhowrsanaan u kordhinayo. Haddaba hadduu arrinku sidaa yahay, muxuu Eebbe u abuuri waayey haweenku iyagoon lahayn xubnahaa laga xayuubinayo? Miyaanu Eebbe oran Insaanka waxan ku abuuray suurad tan ugu wanaagsan?
Mise suurad Ilaah sameeyey baa cid kale toosin uga baahan? Dalkeenna waxa sanad kasta lagu dib gooyaa kumanaan dumar ah iyadoo loo adeegsanayo magaca Eebbe, waxana la marsiiyaa cadaab iyo xanuun ay dunida ku arkaan kan ugu daran.
Anthropology: Gudniinka Fircooniga ah iyo Doorkiisa Jinsiga Views Views: 3, Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa maadooyinka xasaasiga ah ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah ee dumarka. Akhristayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay faahfaahin ka helaan. Gabar lix jir ah ayaa maskax ahaan isku diyaarineysa xanuunka daran ee ay u dulqaadan doonto. Waxay maqlaysaa qaylo ka soo baxaysa teendhada.
Waa qaylada gabdhaha yaryar ee iyada oo kale ah. Walaasheed, oo siddeed keliya ahayd, ayaa teendhada gashay. Cabsi darteed, gabadhu way carartaa. Laakiin koox wiilal ah ayaa si degdeg ah u qabta oo dib u qaada. Midkood waa walaalkeed ka weyn. Kuwa teendhada ku jira ayaa jidhkeeda ku xira xarig oo ma siiyaan suuxdinta maqaarkii mandiil.
Nidaamka ay marayso wuxuu leeyahay magacyo badan. Gudniinka dumarka. Oo si ballaaran, gudniinka gabdhaha. Nasiib darrose, iyada story waa mid ka mid ah malaayiin maadaama gudniinka fircooniga uu weli ku badan yahay sababo la xiriira aaminaad dhaqameed qoto dheer.
Xubnaha taranka ee dibadda ama qayb ahaan ama gebi ahaanba waa laga saaray. Waxay sidoo kale koobeysaa ficillo kasta oo dhaawac ah oo loo geysto xubnaha taranka ee haweenka oo aan dabiici ahayn. WHO waxay ku calaamadeysay 'jarid' inay muujiso naxariis darrada soo jireenka ah. Ururada bani'aadamnimada waxay ku xiraan ku xadgudubka xuquuqda aasaasiga ah ee gabdhaha iyo haweenka.
Macluumaad dheeri ah oo soo ifbaxaya oo ku saabsan falka, ururada adduunka iyo dowladaha waxay ku tilmaameen gudniinka Fircooniga inuu yahay mid waxyeello leh.
Sidaas darteed, waxay sameeyeen isku dayo kala duwan oo ay ku baabi'inayaan gudniinka Fircooniga ah mar uun iyo gebi ahaanba.
Halkee ayuu ka yimaadaa FGM? Hase yeeshe, dadku weli waxay ku sameeyaan gudniinka fircooniga adduunka oo dhan maanta. FGM waa dhacdo caalami ah. Afrika , Aasiya, iyo Bariga Dhexe waddamada ayaa leh heerarka ugu sarreeya ee kiisaska. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kiisas meelo badan oo adduunka ah. Yurub iyo Ameerika waxay leeyihiin taariikh gudniinka Fircooniga ah. Tani badanaa waxay u sabab tahay tahriibka. Cunsur xoog leh oo saameyn ku yeelata qofka la gudo waa gudniinka.
Gabdhaha iyo haweenka uu saameeyay gudniinka fircooniga ayaa badanaa ka soo jeeda qowmiyado isku mid ah, wadankastoo ay ku noolyihiin dalka ay ku noolyihiin. Tan waxaa ka mid ah FGM. Waxaa sidoo kale jira diiwaanno muujinaya in qabiilooyinka asaliga ah ee gobollada sida Latin Amerika ay ku dhaqmi jireen gudniinka hore. Goorma ayuu FGM Dhacayaa? Isha sawirka: The Scottish Sun Cibaadada lafteeda waxay ku dhici kartaa da 'ballaaran oo da' ah. Ilmaha yar yar ee jira dhawr maalmood ayaa lagu jari karaa goynta.
Ama waxay ku dhici kartaa haweenka da'da yar ee isu diyaarinaya in la guursado. Bulshooyinka qaar xitaa way sugaan illaa haweeneydu ay yeelato uurkeeda ugu horreeya.
Badanaa, howsha waxaa la qaadaa ka hor inta aysan gabadhu qaan gaarin. Xilligan, celceliska da'da ayaa hoos u dhacday waxay u badan tahay natiijada tooska ah ee sharciga kahortaga Gudniinka Fircooniga.
Waalidiinta waxaa u fududaanaysa inay si caqli gal ah gudniinka u sameeyaan markuu ilmuhu yaryahay welina uusan dhigan iskuulka. Sidee buu FGM u dhacaa? Oday bulshada ka mid ah ama gabar qaraabo ah ayaa mas'uul ka ah gudniinka Fircooniga ah ee lagu sameeyo gabadha yar.
Waxaa kor u kacay xirfadlayaasha caafimaadka ee gudniinka Fircooniga ah. Masar gudaheeda, xirfadlayaal ayaa ka jaray in ka badan saddex-meelood meel gabdhaha da 'yarta ah.
Taageerayaasha gudniinka Fircooniga ah waxay ku doodeen in tani ay bixinayso hab nabdoon oo lagu sii wado dhaqanka. Si kastaba ha noqotee, dhowr hay'adood oo u dooda xuquuqda haweenka iyo haweenka ayaa dhaleeceeyay daaweynta lagu sameeyo Gudniinka Fircooniga ah. Waxay rumeysan yihiin in gudniinka Fircooniga ah la ciribtiro sababo la xiriira saameyn caafimaad oo muddo dheer ah iyo dhaawac soo gaara awgood. Tani waa iyada oo aan loo eegin cidda fulisa.
Marka howshu bilaabato, dadka waaweyni waxay xakameeyaan gabadha yar maadaama qaar badani jir ahaan u adkaysan karaan gudniinka Fircooniga ah. Ma siinayaan wax suuxin ah xanuunka. Odaygu wuxuu isticmaali lahaa mandiil ama wax kasta oo af leh sida mindi, maqas, ama xitaa galaas. Intaas ka dib, waxay lugaha gabadha ku xiraan xadhig si looga hortago dhaq-dhaqaaqa maaddaama nabarradii nabarradii ka soo bateen.
History Caddaynta Hore ee Gudniinka Fircooniga ah Si la mid ah dhiggeeda ragga, gudniinka dumarku wuxuu ka jiray dhaqamo kala duwan boqollaal sano. Asalka saxda ah ee dhaqanku wali ma cadda. Hase yeeshe, waxaa jira caddayn muujinaya taariikhda dheer ee Gudniinka Fircooniga ah. Khubaro ku takhasusay cilmiga baarista cilmu-nafsiga ayaa helay Masar hooyooyin oo leh astaamo shuban. Tani waa nooc ka mid ah gudniinka fircooniga ah. Dhaqaatiirta qadiimiga ah waxay taariikhaysan jireen mummiyadaha inay ahaadaan qarnigii shanaad ee dhalashadii Masiixiga Tan macnaheedu waxa weeye in dhaqanka gudniinka Fircooniga ahi ka horreeyo diimaha waaweyn ee casriga ah sida Masiixiyadda iyo Islaamka.
Natiijooyinka ayaa xaqiijinaya diiwaanada uu ka tagay taariikhyahankii caanka ahaa ee Giriigga ahaa ee Herodotus markii uu booqday Masar. Wuxuu qoray in gudniinka dumarka iyo kan labkaba ay caan ku ahaayeen dadka reer Masar iyo waliba bulshada deriska la ah. Dhowr qarni ka dib wuxuu arki doonaa gudniinka Fircooniga ah oo galaya dunida Giriigga. Soranus dhakhtar ahaan qarnigii labaad, wuxuu qori lahaa mid ka mid ah sharraxaadda ugu horreysa ee habka gudniinka fircooniga ah ee shaqadiisa caafimaad ee loo yaqaan Gynecology.
Wuxuu ka walwalsanaa xubinta taranka haweenka ee xad dhaafka ah. Xilligaas, astaamaha noocaas ahi waxay ahaayeen cillad xagga dumarka ah, maxaa yeelay kintirka weyn wuxuu u eg yahay xubinta taranka ninka. Intaas waxaa sii dheer, dadku waxay la xiriireen kintirka weyn iyo sariirta. Tan macnaheedu waa rabitaanka galmada.
Sababtaas awgeed, Soranus wuxuu ku taliyay in la gooyo caarada kintirka qoraalladiisa. Shaqadiisu waxay ahayd mid caan ah oo dhawr qarni kadib dhakhaatiirta carabtu ay ku sifeyn doonaan isla nidaamka la soo jeediyay. Ganacsiga Addoomada Qarniyadii 17aad iyo 18aad, ganacsiga addoonsiga wadamada Afrika gudahood waxay ka qayb qaateen koritaanka gudniinka Fircooniga ah. Waxay caado ka noqotay Soomaaliya in la gooyo gabdhaha dhallinta yar ee addoomaha ah.
Addoomada ayaa si isku mid ah ula macaamilay addoomadii Masaarida. Kuwa addoonsada haysta, guditaanka addoommada dumarka ah waxay u horseedi doontaa koror ku yimaada qiimaha iibkooda. Inbadan waxay sii aamminsanaayeen in gudniinka iyo dhiig baxa ay ka hortagi doonaan uurka addoommada.
Gudniinka Fircooniga ah ee Mareykanka In kasta oo gudniinka Fircooniga ah uu inta badan xiriir la leeyahay waddamada Afrika iyo Bariga Dhexe, haddana waqti aan fogeyn ma ahayn in howshu si joogto ah uga dhacday Mareykanka.
Dabayaaqadii 19aad iyo horaantii qarniyadii 20aad waxay arkeen xiisaha sii kordhaya ee daaweynta dhaqanka aan caadiga ahayn ee galmada ee haweenka. Qaar ka mid ah anshax darrada aan caadiga ahayn waxaa ka mid ah cudurka 'hiysteria', 'melancholia', iyo lesbianism.
Si kastaba ha noqotee, siigaysigu wuxuu ahaa dabeecadda hoggaamineed ee u baahan sixitaanka. Dhakhaatiirtu badanaa waxay kuxiran yihiin siigaysiga dumarka nymphomania, ama caafimaad daro xagga galmada ah. Walaac xagga akhlaaqda ah awgeed, dhakhaatiirtu waxay ku samayn lahaayeen gudniin gabdhaha iyo haweenka soo bandhiga astaamaha. Isha sawirka: DM Bourneville iyo P.
Haweenka aan ka soo dirin 'habdhaqanka galmada caadiga ah' ee raggooda waxay ahaayeen kuwo aan caadi ahayn. Oo sidaas darteed, dhakhaatiirtu waxay u adeegsadeen gudniinka inay ku kordhiyaan awoodda haweeneydu inay ugu dambayntii gaarto.
Labada sababood ee habraaca ayaa isku dayay in lagu hagaajiyo galmada dumarka dib ugu noqoshada galmada caadiga ah ee ninkeeda. Xitaa ilaa , shirkadaha caymiska sida Blue Cross waxay kahadleen gudniinka dumarka.
Noocyada Gudniinka Fircooniga ah Inta lagu gudajiro gudniinka fircooniga ah, waxaa jira noocyo kaladuwan oo habab kaladuwan oo kaladuwan. Isha Sawirka: Deutsche Welle Nooca I - Qalitaanka Kintirka Kintirka xubinta taranka waxaa ka mid ah qeyb ka mid ah ama gebi ahaanba laga gooyo kintirka, ama qeybta yar iyo kacsiga xubnaha taranka haweenka. Prepuce, daboolka kintirka, ayaa sidoo kale laga saari karaa. Tan waxaa ka mid noqon kara ka soo bixida faruuryaha waaweyn ee faruuryaha, xubinta taranka ee dubka sare.
Sicir bararku wuu ku jiri karaa ama kuma jiri karo Nooca I FGM halka kintirka iyo daboolka kintirka lagu jaro. Tusaalooyinka qaarkood waa dharbaaxid, kacsi, xoqid, iyo gubida aagga xubinta taranka.
Badankood ma ogaadaan cawaaqib xumada xun ee ay sababi karto. Taabadalkeed, waxaa looga tagaa iyaga oo la nool saamaynta jir ahaaneed iyo nafsadeed ee habraaca. Tani kama muuqato wax ka badan kharashaadka dhaqaale ee lagu daaweynayo dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga ah. Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu xisaabiyaa inay khasab ku tahay waddamada wadar ahaan 1. Waxay filayaan in qiyaastani ay kor u kacdo marka loo eego heerarka gudniinka Fircooniga ah.
Dhibaatooyinka Degdegga ah.
Ha yeeshee, shucuubta xitaa kuwa hablohooda sunno gudeeya siday dadka qaar ku magacaabaanlama gooyo qolfada oo qura balse waxa lala jaraa kintirka oo idil, halka gudniinka Fircooniga ah laga dabarjaro kintirkii iyo dhammaanba faruuryihii cambarka, sida aynu gadaal ka sharxi doonno.
Nabi Ibraahim oo isaga loogu yeero Nabiyada Aabbohood, waxa uu Eebbe ina farayaa inaynu qaadanno diintiisii, oo wixii isaga la faray waa inaynu qaadanno wixii laga reebayna aynu ka fogaanno. Qaar baa ku fasiray meel ka tirsan Shaam, halka qaar kale yiraahdeen waa aaladdii uu Nabi Ibraahiim isku guday, waxana loo badan yahay inay ahayd faas ama gudin.
Culimadu waxay sheegaan in Nabi Ibraahim uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee isguda, ciddiyaha iska jara, surwaal gashada, shaaribka gaabiya, kaba kabsada, seef ku dagaallama, iyo weliba qofkii ugu horreeyey ee ay madaxiisa cirro kasoo baxdo.
Qofkii guditaanka iska daayase muxuu xukunkiisu yahay? Waxa qolfada laga gooyaa qayb goynteedu ay suurtagal ka dhigi karto in dhalfada oo dhan amaba inteeda badani ay qaawanaato.
Gudniinku waxa uu leeyahay laba waqti oo kala ah: Waqti uu waajib yahay kaasi oo ah waqtiga qaan gaarka iyo waqti uu sunno yahay oo ah intaanu qofku qaan gaarin.
Waxa sunno ah bay culimadu leeyihiin in ilmaha la gudo waqti u dhexeeya marka uu dhasho ilaa iyo toddoba jirkiisa, waqtigaasi oo u naxariis badan, dhaawacuna bogsoon ogyahay. Culimada badankoodu waxay isku raaceen inay wanaagsan tahay in la gudo maalinta toddobaad ee dhalashadiisa, in uu taag daranyahay mooyee, markaasi oo dib loogu dhigayo.
Kitaabka Fiqhu Sunna waxa ku soo aroortay inay axaadiista ka hadlaysa gudniinka habluhu dhammaantood daciif yihiin oo aanu mid saxiix ahi ku jirin.
Nabigu waxa uu dhalay afar gabdhood inuu gabdhihiisa gudayna sunnadiisa iyo siiradiisa midna laguma sheegin. Iyadoo ay Saarah la socoto ayuu Ibraahiim soo maray boqor kale, markaas buu boqorkii Ibraahim weydiiyey cidday gabadhu tahay. Ibraahiim markuu boqorkii uga sheekeeyay cidda ay Saarah tahay buu ka baqay inuu damco, markaas bay labadoodu intay boqorkii habaareen buu labada lugood iyo labada gacmoodba ka qallalay.
Labadii wiil baa dhashay weyna isla koreen. Haddaynu xitaa ka dhigno inu xadiisku saxiix yahay, toosinta ku jirtaa ma aha amar uu Rasuulku ku bixiyey in hablaha la gudee waxa weeye qaabkii loo gudi lahaa haddiiba la gudayo. Wararku waxay sheegayaan in Carabtu adeegtooyinka dumarka addoomaha ah oo qura ay gudi jireen. Ha yeeshee dadka kasoo horjeeda gudniinku iyana waxay ku doodayaan in ereygaasi aanu daliil u noqon karin gudniinka dumarka. Waxay leeyihiin afka Carabiga kolka laba wax la magacaabayo waxa labadoodaba lagu magacaabaa magaca kan caansan ama awoodda badan.
Sidaa daraadeed bay leeyihiin sunnada Nabiga ee saxiixa ah meelna kama soo galo gudniinka habluhu, waxa lagu doodayo oo xadiisyo ku saabsan habla gudistuna gebigood waa wada daciif aan shir lala tegi karin, arrinkuna ma sii dhaafsana caado uu Islaamku u daayey waqtiga iyo horumarka cilmiga ama iyagu ha toosiyaan ama ha tiraane. Faraaciintu kolkay Suudaan Dhulkii Nuubiyiinta qabsadeen sidoo kalena boqorradii Nuuba ay Masar qabsadeen bay caadada gudniinka Fircooniga ahi waxay ku fidday Waadiga Niil, ilaa iyo waqtigaan la joogana way ka jirtaa.
Ma jirto dunida meel aan Waadiga Niil iyo waddamada ku dhowdhow ahayn oo laga yaqaan caadadaasi. Waxa la hubiyey in gudniinka caynkaasi ah laga isticmaalo oo qura dalalka Masar, Suudaan, Soomaaliya iyo Kiinya. Intaynaan u gelin dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga ah, bal aynu marka hore sharrax gaaban ka bixinno xubnaha taranka dumarka, si ay akhristaha ugu sahlanaato inu ogaado waxa dhacaya.
Waxa kale oo ka dhex buuxa xididdada dhiigga qaada oo soo gaarsiiya dhiig aad u fara badan. Marka howshu bilaabato, dadka waaweyni waxay xakameeyaan gabadha yar maadaama qaar badani jir ahaan u adkaysan karaan gudniinka Fircooniga ah.
Ma siinayaan wax suuxin ah xanuunka. Odaygu wuxuu isticmaali lahaa mandiil ama wax kasta oo af leh sida mindi, maqas, ama xitaa galaas. Intaas ka dib, waxay lugaha gabadha ku xiraan xadhig si looga hortago dhaq-dhaqaaqa maaddaama nabarradii nabarradii ka soo bateen. History Caddaynta Hore ee Gudniinka Fircooniga ah Si la mid ah dhiggeeda ragga, gudniinka dumarku wuxuu ka jiray dhaqamo kala duwan boqollaal sano.
Asalka saxda ah ee dhaqanku wali ma cadda. Hase yeeshe, waxaa jira caddayn muujinaya taariikhda dheer ee Gudniinka Fircooniga ah. Khubaro ku takhasusay cilmiga baarista cilmu-nafsiga ayaa helay Masar hooyooyin oo leh astaamo shuban.
Tani waa nooc ka mid ah gudniinka fircooniga ah. Dhaqaatiirta qadiimiga ah waxay taariikhaysan jireen mummiyadaha inay ahaadaan qarnigii shanaad ee dhalashadii Masiixiga Tan macnaheedu waxa weeye in dhaqanka gudniinka Fircooniga ahi ka horreeyo diimaha waaweyn ee casriga ah sida Masiixiyadda iyo Islaamka. Natiijooyinka ayaa xaqiijinaya diiwaanada uu ka tagay taariikhyahankii caanka ahaa ee Giriigga ahaa ee Herodotus markii uu booqday Masar. Wuxuu qoray in gudniinka dumarka iyo kan labkaba ay caan ku ahaayeen dadka reer Masar iyo waliba bulshada deriska la ah.
Dhowr qarni ka dib wuxuu arki doonaa gudniinka Fircooniga ah oo galaya dunida Giriigga. Soranus dhakhtar ahaan qarnigii labaad, wuxuu qori lahaa mid ka mid ah sharraxaadda ugu horreysa ee habka gudniinka fircooniga ah ee shaqadiisa caafimaad ee loo yaqaan Gynecology.
Sababtaas awgeed, Soranus wuxuu ku taliyay in la gooyo caarada kintirka qoraalladiisa. Shaqadiisu waxay ahayd mid caan ah oo dhawr qarni kadib dhakhaatiirta carabtu ay ku sifeyn doonaan isla nidaamka la soo jeediyay.
Ganacsiga Addoomada Qarniyadii 17aad iyo 18aad, ganacsiga addoonsiga wadamada Afrika gudahood waxay ka qayb qaateen koritaanka gudniinka Fircooniga ah.
Waxay caado ka noqotay Soomaaliya in la gooyo gabdhaha dhallinta yar ee addoomaha ah. Addoomada ayaa si isku mid ah ula macaamilay addoomadii Masaarida.
Kuwa addoonsada haysta, guditaanka addoommada dumarka ah waxay u horseedi doontaa koror ku yimaada qiimaha iibkooda. Inbadan waxay sii aamminsanaayeen in gudniinka iyo dhiig baxa ay ka hortagi doonaan uurka addoommada.
Gudniinka Fircooniga ah ee Mareykanka In kasta oo gudniinka Fircooniga ah uu inta badan xiriir la leeyahay waddamada Afrika iyo Bariga Dhexe, haddana waqti aan fogeyn ma ahayn in howshu si joogto ah uga dhacday Mareykanka. Dabayaaqadii 19aad iyo horaantii qarniyadii 20aad waxay arkeen xiisaha sii kordhaya ee daaweynta dhaqanka aan caadiga ahayn ee galmada ee haweenka.
Qaar ka mid ah anshax darrada aan caadiga ahayn waxaa ka mid ah cudurka 'hiysteria', 'melancholia', iyo lesbianism. Si kastaba ha noqotee, siigaysigu wuxuu ahaa dabeecadda hoggaamineed ee u baahan sixitaanka. Dhakhaatiirtu badanaa waxay kuxiran yihiin siigaysiga dumarka nymphomania, ama caafimaad daro xagga galmada ah. Walaac xagga akhlaaqda ah awgeed, dhakhaatiirtu waxay ku samayn lahaayeen gudniin gabdhaha iyo haweenka soo bandhiga astaamaha.
Isha sawirka: DM Bourneville iyo P. Haweenka aan ka soo dirin 'habdhaqanka galmada caadiga ah' ee raggooda waxay ahaayeen kuwo aan caadi ahayn. Oo sidaas darteed, dhakhaatiirtu waxay u adeegsadeen gudniinka inay ku kordhiyaan awoodda haweeneydu inay ugu dambayntii gaarto. Labada sababood ee habraaca ayaa isku dayay in lagu hagaajiyo galmada dumarka dib ugu noqoshada galmada caadiga ah ee ninkeeda. Xitaa ilaashirkadaha caymiska sida Blue Cross waxay kahadleen gudniinka dumarka.
Noocyada Gudniinka Fircooniga ah Inta lagu gudajiro gudniinka fircooniga ah, waxaa jira noocyo kaladuwan oo habab kaladuwan oo kaladuwan. Isha Sawirka: Deutsche Welle Nooca I - Qalitaanka Kintirka Kintirka xubinta taranka waxaa ka mid ah qeyb ka mid ah ama gebi ahaanba laga gooyo kintirka, ama qeybta yar iyo kacsiga xubnaha taranka haweenka.
Prepuce, daboolka kintirka, ayaa sidoo kale laga saari karaa. Tan waxaa ka mid noqon kara ka soo bixida faruuryaha waaweyn ee faruuryaha, xubinta taranka ee dubka sare. Sicir bararku wuu ku jiri karaa ama kuma jiri karo Nooca I FGM halka kintirka iyo daboolka kintirka lagu jaro. Tusaalooyinka qaarkood waa dharbaaxid, kacsi, xoqid, iyo gubida aagga xubinta taranka.
Badankood ma ogaadaan cawaaqib xumada xun ee ay pne karto. Taabadalkeed, waxaa looga tagaa iyaga oo la nool saamaynta jir ahaaneed iyo nafsadeed ee habraaca. Tani kama muuqato wax ka badan kharashaadka dhaqaale ee lagu daaweynayo dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga ah. Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu xisaabiyaa inay khasab ku tahay waddamada wadar ahaan 1.
Waxay filayaan in qiyaastani ay kor u kacdo marka loo eego heerarka gudniinka Fircooniga ah.
1click obb installer download
Worst blackheads in ear
thoughts on “Raaxada dumarka fircooniga”
27.08.2021 at 05:46
03.09.2021 at 03:11
04.09.2021 at 09:42
05.09.2021 at 01:42
Opencv convert to uint8
Huawei stakeholder analysis
Most disturbing horror movies ever made
Zushura on Raaxada dumarka fircooniga